I-China Blueberry, i-blackberry, i-mulberry, i-strawberry, i-raspberry, i-bayberry ebomvu, i-cranberry processing machine kunye nemveliso yomgca wemveliso kunye nabavelisi |TSIBA
I-Blueberry, i-blackberry, i-mulberry, i-strawberry, i-raspberry, i-bayberry ebomvu, i-cranberry processing machine kunye nomgca wemveliso
I-Blueberry, i-blackberry, i-mulberry, i-strawberry, i-raspberry, i-bayberry ebomvu, i-cranberry processing machine kunye nomgca wokuvelisa unokuvelisa ijusi ecacileyo, i-turbid juice, i-concentrate yejusi, i-fruit powder, i-jam yeziqhamo kunye nezinye iimveliso.
I-Blueberry, i-blackberry, i-mulberry, i-strawberry, i-raspberry, i-bayberry ebomvu, i-cranberry processing machine kunye nomgca wemveliso inokuvelisa ijusi ecacileyo, i-turbid juice, i-juice concentrate, umgubo weziqhamo, i-jam yeziqhamo kunye nezinye iimveliso. , umatshini wokutshekisha, i-jucer ye-air bag, itanki ye-enzymolysis, i-decanter, i-ultrafilter, i-homogenizer, umatshini wokukhupha, umatshini wokucoca, umatshini wokuzalisa, umatshini oqhelekileyo kunye nezinye izixhobo zokusebenza.Lo mgca wemveliso uyilwe ngombono ophezulu kunye neqondo eliphezulu lokuzenzekelayo;Esona sixhobo siphambili senziwe ngetsimbi ekumgangatho ophezulu, ehlangabezana ngokupheleleyo neemfuno zococeko lokulungiswa kokutya.
* Umthamo wokucubungula ukusuka kwiitoni ezi-3 / ngosuku ukuya kwiitoni ezingama-1500 / ngosuku.
* Unokwenza iimpawu ezifanayo zeziqhamo, ezinjengamaqunube, amaqunube, amaqunube, amaqunube kunye namanye.
* Iziqhamo ezitsha ezinokusetyenzwa kunye neziqhamo ezikhenkcezisiweyo
* Iijusi ezinejusi ye-airbags, initrogen inokuzaliswa ukukhusela, i-anti-oxidation;Izinga lejusi, umgangatho wejusi ulungile.
* I-Pasteurization, inokugcina umbala kunye nevumba lesiqhamo sokuqala
* Nge-enzymatic hydrolysis kunye ne-ultrafiltration, ukufumana iimveliso zejusi ezicacileyo kunye ne-translucent.
* Inqanaba eliphezulu lokuzenzekela kuwo wonke umgca, ngaphandle kokusebenzisa abasebenzi abaninzi.
* Iza nenkqubo yokucoca, kulula ukuyicoca.
I-Blueberry, i-blackberry, i-mulberry, i-strawberry, i-raspberry, i-bayberry ebomvu, i-cranberry processing machine kunye nephakheji yomgca wemveliso: ibhotile yeglasi, ibhotile yeplastiki ye-PET, i-zip-top can, i-aseptic soft package, i-carton yezitena, i-gable top carton, i-2L-220L ibhegi ye-aseptic ngaphakathi igubu, ipakethe yeekhathoni, ingxowa yeplastiki, 70-4500g inkonkxa yetoti.
I-Blueberry, i-blackberry, i-mulberry, i-strawberry, i-raspberry, i-bayberry ebomvu, i-cranberry processing machine kunye nobugcisa bomgca wemveliso:
Khetha izinto ezintsha nezisele zivuthiwe kwaye uhlambe ngamanzi kabini.
Isiqhamo seklasi yokuqala: ingqolowa ebomvu eluhlaza ≤ 5%, isiqhamo esibolileyo ≤ 5%, ukubandakanywa ≤ 3%;
Isiqhamo sesibini: ingqolowa ebomvu eluhlaza ≤ 6%, isiqhamo esibolileyo ≤ 8%, ukubandakanywa ≤ 5%.
Izalathisi zenyama kunye neekhemikhali: umxholo weswekile ≥ 0.04g / ml, i-asidi iyonke ≥ 25g / kg, i-asidi eguqukayo ≤ 3 × 10-4g / ml.
Ukucoca: ngaphambi kwe-juicing, ijusi kufuneka ihlambuluke ngokucokisekileyo kwaye iindawo ezibolileyo kunye nezibunjiweyo kufuneka zisuswe.Ngenxa yokuba izinto eziluhlaza zihlala zicinezelwe ngesikhumba, ukuba zingacocwa, uthuli kunye nokungcola kuya kuziswa kwijusi kwaye kuchaphazele umgangatho.Elona nqanaba lokuhamba kombhobho yi-20L / min-23l / min, kwaye umgama phakathi kombhobho kunye nesiqhamo yi-17cm-18cm.
Kuyimfuneko ukutyumza ijusi ngaphambi kokuba ucofe ukwenza inkqubo yokutyumza kunye nokucinezela ukuphucula imveliso yejusi yezinto eziluhlaza.
Ijusi ikhutshwe ngoxinzelelo lwangaphandle lomatshini.Ngokweemfuno ze-bioengineering enzymolysis kunye neteknoloji ye-juicing, izixhobo ezihambelana noyilo kunye nokukhethwa kwezixhobo zokukhutshwa kwejusi kunye nenkqubo yokwahlula kwenziwa;kunye nokugcinwa okubandayo kwakhiwa ukwandisa ixesha lejusi lamaqunube asendle ukusuka kwiintsuku ezingama-30 ezihambelana nexesha lokukha (ixesha lokukha ngoJulayi nango-Agasti minyaka yonke), kunye neentsuku zokusebenza ezingama-45-60, eziphucule kakhulu izinga lokusetyenziswa kwezixhobo. kunye neenzuzo zoqoqosho zalo mgca wokuvelisa ijusi egxininisiweyo.
Susa amaqhekeza arhabaxa okanye amasuntswana amisiweyo ahlakazwe kwijusi.Ubungakanani bomngxuma wokucoca malunga ne-0.5mm.
I-pectin equlethwe kwijusi iya kwenza ijusi ibe yi-turbid, ngaphezu koko, inokukhusela ezinye izinto kwaye ithintele ukucaciswa kwejusi.I-Pectinase isetyenziselwa i-hydrolyze i-pectin kwijusi yesithelo, ukwenzela ukuba ezinye izinto kwijusi zilahlekelwe ukukhuselwa kwe-pectin kunye ne-precipitate kunye ukufezekisa injongo yokucacisa.Ngokuqhelekileyo, idosi yokulungiswa kwe-enzyme yi-0.2% - 0.4% yomgangatho wejusi yeziqhamo, kwaye ubushushu bulawulwa ku-50 ℃ kwi-3-4 yeyure.
Ukukhuselwa kombala, ukungasebenzi kwe-enzyme kunye nokuvala inzala
Isiqhamo sasendle sityebile kumacandelo e-antioxidant VC, VE kunye ne-β - carotene.Ukongeza, ikwaqulethe iintlobo ngeentlobo zee-anthocyanins zendalo ezinyibilikayo emanzini, ezinefuthe elihle kakhulu lokunyanga izifo ezininzi zamehlo.Ngoko ke, kuyimfuneko ukusebenzisa ukukhuselwa kombala kunye neteknoloji yokungasebenzi kwe-enzyme ukunyusa ukugcinwa kwezinto ezisebenzayo kwinkqubo yokucubungula.Ukubulala inzala kukubulala iintsholongwane ukuthintela ukonakaliswa, enye kukwenza umsebenzi we-enzayim ungasebenzi ukuthintela ukwenzeka kotshintsho olubi olwahlukeneyo.Kusetyenziswe inzalo ekhawulezileyo yobushushu obuphezulu obuphezulu.
Ngale ndlela, ixesha lokuxinanisa linokufinyezwa kwaye umbala kunye ne-flavour yejusi inokugcinwa.Emva kokugxininiswa, ezinye zazo zigcinwa kwaye zithengiswa njengejusi edibeneyo, kwaye ezinye zisetyenziswa njengeziselo ezinomsoco.
Ngaphambili: Imango, ipayinapile, ipapaya, umatshini wokulungisa igwava kunye nomgca wokuvelisa
Okulandelayo: Umnquma, iplamu, i-bayberry, i-peach, i-apricot, umatshini wokucubungula iplamu kunye nomgca wokuvelisa
Isitatshi sombona siGqibezela iMveliso yeFlour ...
Iprojekthi yoLwakhiwo lwezindlu ze-Aqua Hydroponics Poly
Umzi-mveliso weZimbiwa eziThengiswa ngokuNgqo ...